Zuum E508 Atụmatụ | Site na Linux
Zuum E508 bụ ekwentị nwere ezigbo njirimara na-atụle ọnụ ala ya.
La ika Zuum mara maka inye ekwe ntị efu nwere ezigbo njirimara na ọnụ ala dị ala, na nke a ọnụego bụ naanị $ 2,699 pesos na ego na $ 3,671 pesos na kredit. Ọnụ ego dị ala na-atụle na o nwere otu njirimara dịka ọgbọ nke abụọ Moto G nke ọnụahịa ya bụ $ 3,999 na ego.
na Zuum E508 atụmatụ Ha bụ, 5-anụ ọhịa ihuenyo na mkpebi nke 950 × 540 pikselụ nke dị mma ma ọ bụghị HD. Ihe nhazi ahụ bu quad-isi na 1.3Ghz, RAM bu 1GB, 16GB ebe nchekwa di n’ime ya gbasaa rue 32GB. Igwefoto buru ibu bụ megapixels 8 na nke dị n'ihu bụ megapixels 2.
Sistemụ arụmọrụ bụ gam akporo 4.2.2, nke adịlarị ochie na-atụle na mbipute 5.0 adịworị ma na ọtụtụ ekwentị na ụlọ ahịa nwere Android 4.4.2 ma ọ bụ 4.4.4. Ihe na-adịghị mma bụ batrị, nke a bụ naanị 1,600mAh nke pụtara na ọ gaghị adịru ọtụtụ awa, o yikarịrị ka ọ gaghị adịgide karịa awa 12 na, naanị site n'iji ya oge ole na ole batrị ga-agba ọtụtụ.
Na mmechi, Zuum E508 bụ ekwentị nwere ezigbo njirimara n'ozuzu ya, mana n'ihi batrị ya anyị anaghị akwado ekwentị a, eziokwu bụ na batrị ahụ agaghị adịgide.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Njirimara nke Zuum E508